About us - uHenan Wenyuka Imishini Nezinsiza kusebenza Co., Ltd.
I-Henan Ascend Machinery & Equipment Co., Ltd. yasungulwa ngo-2005 futhi itholakala endaweni yobuchwepheshe beZhengzhou City, esifundazweni saseHenan. Njengenkampani yemishini yezimayini eqhutshwa ubuchwepheshe, izibophezele ku-R & D, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nesevisi yokuthengisa ngemuva kokuthengisa imishini nemishini yezimayini.
Imikhiqizo eyinhloko yenkampani ingama-crusher, imishini yokugaya imishini, imishini yokuhlomulisa amaminerali, i-rotary dryer ne-crusher & izingxenye zokugaya zokugaya. Ngaphezu kwemakethe yasekhaya yaseChina, imishini ye-Ascend inweba ibhizinisi layo emazweni angaphezu kwezi-60 nezifunda.
Igxile kwikhwalithi yomkhiqizo nangemva kokuthengisa, i-Ascend inqobe ukudunyiswa nokwethenjwa kwamakhasimende aphesheya. Le nkampani ineqembu lonjiniyela eliqeqeshiwe elibhekele ukubonisana ngaphambi kokuthengisa kwezobuchwepheshe, izixazululo zobuchwepheshe enqubeni yokuthengisa, ukufakwa, ukuthunyelwa kanye nesevisi yokuthengisa ngemuva kokuqinisekisa ukuthi amakhasimende angathenga futhi asebenzise imishini enokuthula kwengqondo.
Inkampani yethu yokwenyuka ithatha insizakalo yamakhasimende njengomsebenzi wethu oyinhloko, sinenkonzo ephelele yokuthengisa ngaphambi nangemva kwensizakalo yokuthengisa.
(1) Iseluleko sokukhetha imodeli.
(2) Design futhi womshini imishini ngokusho izidingo ezikhethekile yekhasimende
(3) Le nkampani imahhala kubasebenzisi bendawo yobunjiniyela kanye nasendaweni yokuhlelela abasebenzi ezobuchwepheshe ukuthi benze izinqubo nohlelo oluhamba phambili
(1) Hlela ochwepheshe ukuba baye esizeni ukuqondisa ukufakwa
(2) Uma umshini wakho ungasekho esikhathini sewaranti, ungaya ehhovisi leNayile phesheya kwezilwandle uyothenga okokusebenza.
(3) amasethi wemishini ephelele afakiwe, abasebenzi bezobuchwepheshe besikhathi esigcwele abangama-1-2 ukuhlala mahhala ukukhokhela amakhasimende asendaweni ukukhiqizwa kwenyanga engu-1, kuze kube yilapho ukwaneliseka komsebenzisi.
Imiphi Imikhiqizo Esiyihlinzekayo?
1. Izinsiza Zokuchoboza: umhlathi crusher, umthelela crusher, Isigaxa crusher, isando crusher, roller crusher, crusher emihle, kwakwakhe crusher, itshe kwasani umugqa ukukhiqizwa, njll
2. Isitshalo Sokuchoboza Umakhalekhukhwini: umshini wokugaya umakhalekhukhwini, isigaxa somthelela weselula, isigaxa sesigaxa seselula, isitshalo sokwenza isihlabathi se-vsi, njll.
3.Izinto Zokugaya: isigayo sebhola, isigayo senduku, isigayo se-raymond, isigayo se-pan esimanzi, njll.
4. Isisetshenziswa seSand neGravel: umenzi wesanti, isitshalo sokwenza isihlabathi se-vsi, uhlobo lwebhakede le-sand washer, i-sand sand washer, njll.
5. Iphrojekthi ye-ore yegolide nezixazululo: isitshalo se-trommel segolide esingumahamba nendlwana, ukuvuza kwamathangi, ukugeleza kwenqwaba, umugqa wokwahlukanisa amandla we-ore wegolide, i-CIL / CIP, njll.
6.Izinsiza Zokucubungula Amaminerali: ukwahlukaniswa komoya, isigaxa esivunguza, itafula lokunyakazisa, umshini wokugudla